Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahasahiranana mamela takaitra | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahasahiranana mamela takaitra
Tsy atao resaka intsony ny findangan’ny vidim-piainana mampitombo ny fahasahiranana efa mandifotra ka mampimenomenona ny rehetra. Mampahory olona maro tototry ny fahantrana. Tsy hiverenana koa ny fikatson’ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Mahatezitra am-pitoerana ny mpitondra fiara, no sady eo andaniny manery ny mpandeha an-tongotra hisisitsisika raha tsy hita intsony izay ametrahana tongotra. Tsy misy ny fandaminana, mifameno ny hafetsifetsena sy ny fahasahisahiana hany sisa fifampifehezana noho ny tsy fahitana rariny avy amin’ny tsy fampiharana ny lalàna sy ny fitsipika.
Tsy mila sary mihetsika akory fa sary indray mipika ny fifanjevoana eny amin’ny arabe na any Mahamasina, na any Ankazomanga, na any Ampandrana, mainka moa fa iny Andravoahangy-Ambony iny, dia ny fifanamboarana ao anatin’ny tsy fisian’ny fandaminana samy mandeha samy mitady ny ahafahany mandroso anivon’ny lamin’ny korontana. Tsy ny fahazarana amin’izany no ahafahana manarina ny toe-tsaina tokony ho izy araky ny maha olona miaina am-piraisamonina.
Manginy ambon’izany ireo lavadavaka sy lavaka lalina, fandrika an-dàlambe ho an’ny mpandeha tongotra, ny tsy ampy fitandremana azy ireny dia mety ho potraka na folaka na mitondra takaitra noho ny fahatapahana taolana. Lakalaka ny fizorana rehefa dobon’ny rika ny arabe na rehefa amin’ny ora anjakan’ ny haizina.
Tsy afa-maina amin’ny lavaka koa ny fiarakodia. Mikarentsana toa mitaraina mihitsy ny vatan’ny fiara raha sendra mitontona tsy nampoizina ao anatin’ireny vilany lalimbe ireny. Ny kodiarana moa dia mitondra faisana manokana. Ny firenena anefa tsy mamokatra na iray aza amin’ireo kojakoja momba ny fiara. Noho izany, ny fitombon’ny fahasimbana vokatry ny faharatsian-dàlana dia mampitombo toy izay ny vola mivoaka any ivelany takalon’ireo kojakoja afarana. Mampandeha ny tsenan’ ny mpivarotra kojakoja izany nefa manabotry ny firenena noho izay tsy izy.
Fantatra fa tototry ny fahasahiranana ny tompon’andraikitra eo amin’ny fitantanana, izay ierehana mitaky fanamboarana avokoa. Raha ireo sisin-dàlana atokana ho an’ny mpandeha an-tongotra sy ny arabe ho an’ny fiara no dinihana noho izy ireo tomefin’ny fandriky ny lavadavaka sy lavakabe, mipetraka ny fanontaniana, hanaovana vonjy maika ve ny fanamboarana ka ny ampitso na amin’ny herintaona dia hiverina na hiitatra kokoa aza ny fery ?
Tsy vitan’izay ihany anefa fa na atao manara-penitra ny fanamboarana ka tsy tsara sikotra ny dalina sy ny fantsina fivalanan’ny riaka dia ho dobo ihany ny arabe, ary raha vita soamantsara aza ny fitaizana ny lalan-driaka nefa mbola tsy voafehy ny fanarin’ny mponina ny fako indrindra fa ireo fako misy sachet plastique dia vetivety foana dia ho tsentsina indray ny dalina.